सिड्नीको रमाइलो र रोमाञ्चक आकर्षण – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सिड्नीको रमाइलो र रोमाञ्चक आकर्षण
२०७१ माघ २४, शनिबार ०२:४१ गते
in विचार, साहित्य
डार्लिंङ हार्बरमा बसेर कफी पिउँदै गरेको स्टाटस् फेसबुकमा महिनाअगाडि राख्दा होस् या सिड्नीमा हुन गइरहेको एउटा एक्स्पोका लागि स्वयंसेवक चाहियो भनेर स्टाटस् राख्दा, मेरो मन सिड्नी पुगिसकेको थियो । अझ, मभन्दा मेरा अनन्य मित्र सन्तोष र प्रिय दाजु निष्प्रभलाई मेरो आगमनको व्यग्रता बढी थियो । हामी कुनै समय कुनै स्थानमा यसरी भेटिने मीठो कल्पनाको प्रतीक्षामा थियौँ ।
सिंगापुर विमानस्थल ओर्लेको केही समयपछि मात्र थाहा भयो, मैले मेरो ज्याकेट त्यहीँ छाडेछु । विमानबाट उत्रनुअघि मेरो सिटनजिकका नेपाली भाइहरुलाई सामान छुट्ला नि भनेर मैले नै भनेको थिएँ । तर, आफैँले छाडेछु । ज्याकेटभन्दा पनि मह¤वपूर्ण चीज मोबाइलको चार्जर थियो, जुन त्यहीँ छुटेको ज्याकेटमा थियो । जहिले पनि जे कुराको अभाव हुने सम्भावित लक्षण देखिन्छ, त्यसको एक–एक बुँद छाडिन्न रहेछ । मैले त्यस्तै गरेँ । सिड्नी ओर्लनेबित्तिकै मलाई भाइबरमा फोन गर भन्ने सन्तोषको कुरा, मलाई लिन आउने निष्प्रभ दाइसँग सम्भावित गर्नपर्ने फोन, त्यसैले मैले आफ्नो मोबाइल अफ गरेर एयरपोर्टमा रहेको निःशुल्क इन्टरनेटतिर लागेँ । मलाई मोबाइलको ब्याट्री जोगाउनु थियो ।
सिड्नीको किंग्सफर्ड स्मिथ विमानस्थल पुग्दा मलाई धेरै मानेमा डब्लिन एयरपोर्टसँग मिलेको पाएँ । निष्प्रभ दाइलाई अलि चित्त बुझेन छ कि क्या हो, उनले भनिहाले– डब्लिनले सिड्नीको कपी ग¥या हो कि ? जिपिएसमा ६५ इलाइ स्ट्रिट, रिभ्सबी ठेगाना हाल्दै हामी एयरपोर्टबाट अगाडि बढ्यौँ । गाडीभित्र गीत गुन्जिएको थियो, ‘धाराबाट आउने चिसो, पानी हो कि रक्सी ।’ म गीतको तालमा सहर हेर्न व्यस्त रहेँ । सहर सफा थियो । मौसम खुलेको थियो । मनले कल्पेको सिड्नी मेरो अगाडि थियो । हजारौँ गाडी गुड्दा पनि हर्न पटक्कै बजेको थिएन, धूलो थिएन । मैले एउटै कुरा कल्पेँ, काठमाडौ पनि यस्तै सहर भएको । कम से कम राजधानी हुनाले काठमाडौँले यो हैसियत राख्छ । हरेक हिसाबमा सिड्नी साँच्चै नै सिड्नीजस्तै थियो ।
मेरो यो अस्टे«लियाको पहिलो भ्रमण थियो, तथापि आयरल्यान्डको बसाइँले धेरै कुराको नयाँपन घटाएको थियो । बाटाका नाम, सहरको संरचना, घरहरुको बनावट अनि अरु थुप्रै डब्लिन र सिड्नीमा समानान्तर थिए । अन्य देशको तुलनामा यहाँका नेपालीहरुलाई अथवा भनौँ, सबै आप्रवासीहरुलाई अलि सजिलो भएको पाएँ । काम गरेर कलेजको फि भर्न सबैले सक्ने रहेछन् । स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलेकाहरु अनि यहाँको राहदानी लिएकाहरु थुप्रै छन् । अनि, तिनीहरुको जीवनशैली पनि उत्कृष्ट रहेको पाएँ । नेपालीहरुले परदेशमा यसरी स्थायित्व जमाएको देख्दा मनमा निकै नै खुशी लाग्यो । जहाँ रहे पनि नेपालीहरुले नेपाल बिर्सेका छैनन्, नेपालको माया औधी गर्छन् । अनि, मिलेसम्म सबैलाई नेपाल नै फर्कने मन छ ।
यहीँ बसेर अधिकांशले नेपालमा रहेका आफन्तहरुको खर्च भरेका छन् । अस्ट्रेलियामा नेपालीको संख्या बाक्लै छ । देश छाडेर प्रदेश गएपछि धेरै मानिसहरु यतै भासिएका छन् । कमै रहरले, धेरै कहरले । राष्ट्रियताको कुरा बेला–बेलामा
उठ्छ । देश छाडेर गएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालप्रतिको माया बढ्नु स्वाभाविक नै हो । विदेशमा रहँदा नेपाली भन्ने कुराले बढी मह¤व राख्छ । थर र वतनको मतलब हुँदैन । देश छाड्नु विवशता हो, रहर भने पक्कै होइन । देश छाड्दैमा राष्ट्रियता हरायो भन्न मिल्दैन । नेपालमा नै बसेर सिन्को नभाँच्नेभन्दा विदेश गएर परिश्रमको मूल्य नेपाल भित्र्याउनु ठूलो हो । मलाई गर्वका साथ भन्न मन लाग्छ– विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले देशका लागि थुप्रै काम गरेका छन् । गीत, संगीत, भाषा, पत्रकारिता, लगानी र अन्य क्षेत्रमा विदेशमै बसेर भए पनि जगेर्ना गरेका छन् र आफ्नो स्थायित्व जमाएका छन् । यसका लागि सलाम ! सिड्नीबाट नेपाली भाषाका पत्रिका निस्कन्छन् । यहाँ थुप्रै नेपाली रेस्टुरेन्टहरु छन्, डक्टर छन्, नर्स छन् अनि अरु थुप्रै पेसामा नेपालीहरु संलग्न छन् ।
सिड्नीमा भएको एउटा ट्राभल एक्स्पोमा सहभागी हुन म पुगेको थिएँ । एक्स्पोमा मलगायत सन्तोष र निष्प्रभ दाइ साथै थियौँ । हामीले धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरुलाई हाम्रो स्टलतिर आकृष्ट गर्न प्रयास ग¥यौँ । नेपाललाई चिन्ने धेरै पर्यटक थिए । अझ एकपटक गएका र पटकपटक गएका पर्यटकहरुको राम्रै उपस्थिति थियो । आफ्नो देशको वाहवाही सुन्दा हामी निकै प्रफुल्लित थियौँ । त्यो एक्स्पोमा नेपालबाट हामीमात्र गएका थियौँ, त्यसैले कतिले त हामी नेपाल पर्यटन बोर्डको आधिकारिक मान्छे हौँ कि भनेर सोधेका थिए ।
नेपाललाई धेरैले हिमालको मात्र देश भनेर चिन्छन् । सगरमाथा नेपालमा हुनाले पनि यस्तो भएको हुनुपर्दछ । हामी यसपटक सफारी पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न त्यहाँ उभिएका थियौँ । धेरै पर्यटकहरु नेपालमा निकुञ्ज छ र सफारी हुन्छ भन्दा आश्चर्यमा परेका थिए । जे होस्, दुईदिने मेलामा हामीले नेपालको प्रचार त ग¥यौँ अझ त्योभन्दा बढ्ता सफारी पर्यटनको ग¥यौँ ।
हाम्रो एक्स्पो जर्ज स्ट्रिटको टाउन हलमा भएको थियो । जर्ज स्ट्रिट डब्लिनको ग्राफ्टन स्ट्रिट र लन्डनको अक्सफोर्ड स्ट्रिटजस्तै देखिन्थ्यो । टाउन हलबाट देव्रे लागेमा सिटीको सुन्दर हार्बर डार्लिंङ हार्बर पुगिने रहेछ । हामी एक दिन डार्लिंङ हार्बर पुग्यौँ । ‘दिउँसो भएर हो, चहलपहल नभएको’, मसँगै हिडेका साथी रामुले भने । साँझमा त रेस्टुरेन्टहरु पूरै भरिन्छन् रे । जे होस्, दिउँसै भए पनि त्यहाँ चहलपहल राम्रै थियो र म अनुमान लगाउन सक्थेँ, साँझको परिदृश्य । सिड्नी जानुअगावै मैले फेसबुकमा यहीँ कतै बसेर कफी पिएको स्टाटस राखेको सम्झेँ, अनि साथीहरुलाई आग्रह गर्दै एउटा कफी सोपमा कफी खाइयो । कफी दुईपटक पिउँदा समेत यहाँको मनमोहक दृश्यले हामीलाई यहीँ बस्न आग्रह गर्दै थियो । साँच्चै नै सुन्दर छ, डार्लिंङ हार्बर ।
एयरपोर्टमा मैले सिड्नीमा कहाँ–कहाँ घुम्ने भन्ने पुस्तक लिएको थिएँ । पुस्तक पल्टाउँदै जाँदा मैले थुप्रै ठाउँहरु उत्कृष्ट पाएँ । जानैपर्ने ठाउँहरुको त सूची एक दर्जन नै पुग्यो । मैले घुम्नका लागि मेरा साथीहरुको अनुकूलता पनि हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो । रातको ११ बजेको थियो । भाइबरमा रामुलाई अनलाइन देखेँ । कुरैकुरामा रामुले मलाई मेन्ली बिच लैजाने कुरामा सहमति जनायो ।
मेन्ली बिच जाने फेरीहरु सर्कुलर किबाट लाग्दोरहेछ । सर्कुलर किको प्लेटफर्म २ नेर यहाँका आदिवासीहरु शिष्ट शैलीमा पैसा माग्दै थिए । उनीहरुसँग फोटो खिच्न अगाडि राखिएको बटुकोमा नोट वा क्वाइन राख्नुपर्दथ्यो । मैले पनि १ डलरको क्वाइन झारेर उनीहरुसँग फोटो खिच्न बसेँ । फेसबुकमा यो तस्बिर राख्नेबित्तिकै कथाकार किशोर पहाडी दाइको प्रतिक्रिया आयो, दाजुले सन् २०१० मा यहीँ उनीहरुसँग फोटो खिच्नुभएको रहेछ ।
सिड्नीको ओपेरा हाउस, सर्कुलर ब्रिजलाई पार गर्दै फेरीले गति लिँदै थियो । विभिन्न गन्तव्य भएका फेरीहरु त्यहाँ ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । टाढैबाट सिड्नीको टोरोंगा जु पनि देखियो । हामीलाई मेन्ली बिच पुग्न करिब ३० मिनेट लाग्यो । निकै घमाइलो थियो र हावा पनि चलेको थियो । अस्टे«लिया अंकित टिसर्ट मैले पहिलोपटक यहीँ किनेँ । मेन्ली बिच आफैँमा सुन्दर थियो । अझ यसमा सुन्दरता थप्ने सुरा–सुन्दरी थिए । घाममा ट्यानका लागि बस्ने पनि उत्तिकै थिए ।
यस्तै घुम्नेक्रममा हामी वाट्सन वे पनि पुग्यौँ । वाट्सन वेका सुन्दर बगर, हार्बर र पानीमा तैरिएका पानीजहाजहरु निकै सुन्दर देखिन्थे । बगरमा केही केटाकेटीहरु बालुवाको घर बनाउन व्यस्त थिए भने कोही पानीमा छप्लाङ्–छुप्लुङ् गर्दै रमाउँदै थिए । हामी हार्बरको दृश्यलाई कैद गर्दै वाट्सन वेको अर्को किनारातिर लाग्यौँ । यहाँबाट हामीले सुन्दर क्लिफसको अवलोकन गर्न पायौँ । सर्कुलर ब्रिज र ओपेरा हाउस पनि मज्जाले देखिँदोरहेछ ।
एक दिन हामी सिड्नीको टोरोंगा जु गयौँ । चिडियाखानाको मुख्य गेट पुग्न केबलकारको व्यवस्था थियो । केबलकारले मनकामनाको झझल्को दिलाएको थियो । त्यहाँ विभिन्न जनावारहरुलाई अति व्यवस्थित तरिकाले राखिएको छ । उनीहरुको राम्रो वासस्थान र आहार भएर हो कि सबै जनावार प्रफुल्ल देखिन्थे । मेरा लागि कंगारू र जिराफ नौला थिए । निकै नै उत्सुकताका साथ हेरियो । चिडियाखानाभित्र सिगल शो र चराहरुको शो हुनेरहेछ, त्यो पनि हेरियो । दुवै प्रस्तुतिले त्यो दिनको भ्रमण निकै नै सार्थक तुल्यायो । टोरोंगा जु पूरै घुम्न भने एक दिन सिंगै चाहिन्छ ।
बारबिक्यु गरी एक साँझ रमाइलो गरेर बस्ने सल्लाह सन्तोषसँग पहिले नै भएको थियो । सन्तोषको घरमा बस्नेक्रममा दुईपटक बारबिक्यु गरियो । कुखुराको मासु, भेँडाको मासुको मीठो परिकारले तानिरहेको बेला फेरि अर्को बारबिक्युको संजोग जु¥यो, जर्ज रिभरको छेउमा रहेको स्टिल हिलपार्कमा । यहाँ त प्रत्येक पार्कमा बारबिक्यु स्ट्यान्ड राखिएको हुनेरहेछ, निःशुल्क प्रयोगका लागि र ग्यास पनि सरकारले दिने । अचम्म पनि लाग्यो, यहाँको सरकारको कार्यप्रति । मैले अन्य कुनै पनि मुलुकमा यो देखेको थिइनँ ।
नेपाल फर्कने दिन नजिकिँदै थियो । निष्प्रभ दाइ र मैले पहिले नै सल्लाह गरेका थियौँ, हामी एक साँझ ओपेरा हाउसको अगाडि बसेर खाना खाने अनि बोटानिकल गार्डेन घुम्ने । अन्तिम दिनको अघिल्लो साँझ यो दुवै कुराको संयोग मिल्यो । बोटानिकल गार्डेन घुमेर हामी ओपेरा हाउसनेरको एउटा रेस्टुरेन्टमा
बस्यौँ । बर्गर र कबाब आउन निकै नै समय लाग्यो । हामी त्यही समयमा प्योर ब्लन्डसँगै हार्बर ब्रिजको रात्रिकालीन दृश्य हेर्न र तस्बिर कैद गर्न व्यस्त भयौँ ।
सिड्नी दुई कुराको राजधानी थियो, मेरा लागि । एउटा अस्टे«लिया र अर्को साताको साहित्यको । हामी एक साँझ साताको साहित्यको सम्पूर्ण टिम जम्मा भयौँ । हामी तीन सम्पादकीय मण्डल म, निष्प्रभ दाइ र जयन्ती भाउजू । प्रायोजकहरु डा. किरण थापा र डीला खरेल । हाम्रो साताको साहित्य पुरस्कारका निर्णायकहरु महेन्द्र पौडेल र सुजित सिग्देल । भाउजूको अस्वस्थताको कारण हामीले ऋषि आचार्यलाई छुटाउनु प¥यो । सुजितजीको कविता प्रसंग पनि सुनियो, म र निष्प्रभ दाइले भने केही कविता सुनायौँ ।
हरेक नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा हार्बर ब्रिज वा सर्कुलर किको सेरोफेरोमा हुने आतिसबाजी विश्वमा नै लोकप्रिय छ । निष्प्रभ दाइ मलाई भन्दै हुनुन्थ्यो बस्न । मैले यो हेर्न अझै १ महिना सिड्नी बस्नुपथ्र्यो, जुन सम्भव थिएन । नेपालमा थुप्रै कामहरुको थाती थियो । अझ, त्योभन्दा भर्खर मसँग हाँस्न थालेकी सूरभि थिई । सन्तानको मोह अति नै हुँदोरहेछ । यत्तिकैमा सिड्नीमा छोरीको सम्झनामा कविता पनि लेखेँ ः
तिमीसँग केही दिन छुट्दा त
कस्तो औडाहा भएको छ मलाई
प्रत्येक दिन आमालाई छोड्दै
मुग्लान भासिने सन्तानहरु देख्दा
आमालाई कस्तो हुँदो हो !
सिड्नीको यात्रा धेरै कुरामा सार्थक रह्यो । सिड्नी टावर, ब्लु माउन्टेन, क्यानबेरा, रोयल नेसनल पार्क, बन्डाई बिच, ब्लो होल कायामा, उलंगलगायतका थुप्रै ठाउँ पुगियो । कहिले आरजू र लक्ष्मी, त कहिले रामु र श्वेता । कहिले इन्दु भाउजू र कविन्द्र दाइ त, कहिले महेन्द्र दाइ र कमला भाउजू । साथी लक्ष्मण पनि धेरै ठाउँमा सँगै हिँडे भने मामा विनोदको साथ पनि उल्लेखनीय रह्यो । सिड्नी कुनै पनि हिसाबमा मेरा लागि घरभन्दा कम थिएन । यात्रामा साथ दिने सबैलाई सम्झन्छु । साथी सन्तोष र भाउजू सिर्जना अनि निष्प्रभ दाइ र जयन्ती भाउजूलाई धन्यवाद जति दिए पनि कम नै हुन्छ ।